Home Wararka Abaabulka Mudaahraadyo waaweyn oo ka bilowday Muqdisho
Abaabulka Mudaahraadyo waaweyn oo ka bilowday Muqdisho
Abaabul mudaaharaadyo xoog leh aya ka socda caasimada Muqdisho waxaana magaalada ka socdo is diyaarin ay wadaan dhalinyarada, ardayda iyo darawalada gawaarida dadweynaha.
Waxaa meeshii ugu sarreeyay gaartay caburinta weriyaasha iyo warbaahinta halkii markii hore ay tabasho qabeen siyaasiinta iyo shacabka gobalka Banaadir iyo kuwa Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana arrintan ay keentay in ay is abaabulaan dhammaan shacabka Muqdisho oo quus ka taagan caburinta Farmaajo & Kheyre.
Waxaa shaki kaa gelaya nuuca dowladda maanta ka jirta Soomaaliya markii aad eegto heerka caburinta iyo jirdilka lagula kacayo dadka ka aragti duwan madaxda dowladda Soomaaliya.
Dowladda ayaa sameysay talaabooyinkii ugu dambeeyay ee aamusinta warbaahinta kadib markii maanta oo kaliya ay xarag iyo jirdil isugu dartay ilaa 5 weriye oo ka shaqeeya 3 xarun warbaahinta oo ku yaala magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa hore shirarka looga joojiyay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo iyadoo ay xabsiyada la dhigay boqolaal dad ah oo ka aragti duwan madaxda dowladda Soomaaliya.
Dad badan ayaa ka digayaa halis ka dhalin karta caburinta weriyaasha iyo dadweynaha waxaana muuqda in kacdoon toos ah uu ka bilaaban karo Muqdisho. Cabashada waxa kaliya ma ahan weriyaasha iyo siyaasiinta balse waxaa qaba caruur iyo ciroole dadka ku nool Muqdisho.
Wadayaasha gaadiidka BL-ka ayaa maalintii labaad dhigay maanta banaanbax waxaana qaarkood loo geestay Jirdil iyo xarig. Wadayaasha ayaa sheegayay in ay iska iibiyeen gaadiidka Tax-ga iyo gaadiidka kale ee raaxada kadib markii ay waayeen goobo ay maraan, arintaasi waxay horseeday dhaqaalo la’aan iyo bur burka qoysas badan.
Weriyaasha, siyaasiinta iyo shacabka Muqdisho iyo Baydhao ayaa ah bulshada kaliya ee maanta uu saaran yahay culeeska caburinta waxaana meesha ka baxday xuquuqdii halka taas oo dalka u horseedi karta kacdoon dadweyne.
Faqiih Tolkii Kama Jano tago PSF; Somali Waxba Isma Dhaanto Bal Aarag Isimadii Puntland.
Farmajo waa Diiday Dimoqraadiyad ee Xoog ha looga wareejiyo Xukunka inta Waqti Jiro.
Maxaa ka socda Garoonka Diyaaradaha ee Muqdishu
Finland grants €7.65 million to improve Somali children’s educational opportunities
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - December 8, 2021
Finland announced a €7.65 million grant, Tuesday, to UNICEF to strengthen educational services for children in Somalia, Anadolu News Agency reports. "Finland is extremely pleased...
Bayan Research Center aims to define problems facing Somali Americans, provide data, and recommend...
Somali Americans have a lot of pressing questions about family problems, substance abuse, mental illness, homelessness, and other issues. At Mohamed Shuayb’s St. Anthony-based...
LISTEN: South Portland’s new mayor Deqa Dhalac recalls her journey from Somalia to local...
South Portland has a new mayor, and perhaps the door opening for Maine's newer immigrants. Deqa Dhalac, was chosen by the South Portland Council...
China donates 500,000 vaccine doses to Somalia
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - December 7, 2021
China has donated an additional 500,000 Sinopharm vaccines to Somalia. In April, China became the first country in the world to donate vaccines, 200,000...
Faqiih Tolkii Kama Jano tago PSF; Somali Waxba Isma Dhaanto Bal...
Farmajo waa Diiday Dimoqraadiyad ee Xoog ha looga wareejiyo Xukunka inta...